blue sky service center: Ytune ဆိုသည်မှာ
ဖတ်ထားမှတ်ထား သည် များ ကို မှတ်စု တစ်ခု အနေဖြင့် ပြန်တင်ပြထားပါသည်။
မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများမှ သင့်ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုသော အခါ ပုံမှန် မြည်နေသော Ring မြည်သံ အစား တီးလုံးသံလေးများ ကြားလိုပါသလား? Ytune ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော သံစဉ်များဖြင့် သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ချိန်တိုင်းမှာ စိတ်ကြည်နူးမှုရယူနိုင်ပါတယ် .. Ytune အား ပုံမှန်လစဉ်ကြေး ပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့် မိမိထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသော မိတ်ဆွေများကို Ring Tune သီချင်းသံလေးများ နားဆင်စေရင်း ရသသစ်တစ်မျိုးခံစားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
သင့်မိတ်ဆွေများ ထံသို့ တစ်နေ့တာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ချိန်တိုင်းအတွက် “သံစဉ်များသီကျူးပေးနေမဲ့ Yatanarpon Ytune” အား အသုံးပြုကြပါစို့ ...
Online Register ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
- ပထမအဆင့်အနေဖြင့် Ytune Service Website (http://www.ytune.com.mm ) သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
- Ytune Service ရယူရန် ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီအတွက် အကောင့်တခုစီ လျှောက်ရမည်။ အကောင့်လျှောက်ရန် အတွက် Ytune Service Website ပထမဆုံးစာမျက်နှာ ဝဲဘက်အထက်နားရှိ Register ဟူသော Link မှတဆင့် သွားရောက်၍ အောက်ပါ form အားဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Form ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် APPLY FOR A DYNAMIC PASSWORD Button အားနှိပ်လိုက်ပါက Ytune Service အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည့် Password အား သင်၏ဖုန်းသို့ SMS Message ချက်ချင်း ပေးပို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
-ရရှိလာသော Password အား အောက်ပါ form တွင်ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Password ဖြည့်စွက်၍ Confirm Button အား နှိပ်ပြီးလျှင် Register ပြုလုပ်ခြင်း အဆင့် ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
SMS Register ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
-	ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဖုန်းကုဒ်နံပါတ် 1772 သို့ Reg ဟုရေးသား၍ Message ပေးပို့ရပါမည်။
-	အသုံးပြုသူများထံသို့ Service System မှ Ytune Service တွင် အကောင့်တစ်ခု ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း Auto Return Message Code 777777 အား ပေးပို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
-	System မှပေးပို့လိုက်သော Default Password Code Number သည် Security အရ အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားပါသဖြင့် အသုံးပြုသူများမှ ဖုန်းကုဒ်နံပါတ် 1772 သို့ [cpw +“your password” ] ဟုရေးသား၍ Message ထပ်မံ ပေးပို့ရပါမည်။
-	ထို့နောက် Ytune Service အား ဝင်ရောက် အသုံးပြုသော သီးခြား password တစ်ခုကို အသုံးပြုသူများထံသို့ System မှ Message ပေးပို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူ Member များအတွက် လမ်းညွှန်
-Ytune System အား အသုံးပြုသူ Member များအတွက် System မှ Default Ring Tune တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(Ytune Store & Top List) သံစဉ်များ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန်
လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းများကို Ytune Store (သို့မဟုတ်) Top List စာမျက်နှာ ၂ ခုတွင် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်ရာတွင် Ring Tune Code (သို့) သီချင်းအမျိုးအစား(သို့) သီချင်းသီဆိုသူ (သို့) သီချင်းအမည်ဖြင့့်် ရှာဖွေ၍ စမ်းသပ်နားထောင် ရွေးချယ်နိုင်ရန် လက်ရှိ ရေပန်းစားနေသော သီချင်းများနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် သီချင်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို Top List စာမျက်နှာ မှတဆင့် လ အလိုက်၊ အပတ်စဉ် အလိုက် ထိပ်ဆုံး စာရင်းများကို ရှာဖွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
(My Ytune) ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များ စုစည်းမှု
လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူထားသော သံစဉ်များအား မူပိုင်သံစဉ် (Default Tone) တစ်ခု ထားရှိနိုင်ခြင်း အပြင် အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် အစရှိသဖြင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ မိမိစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခု (Time Period Tone) ထားရှိနိုင်ခြင်း၊ စ သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို My Ytune စာမျက်နှာတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုသော နံပါတ်များကို မူတည်၍ သံစဉ်များအား အုပ်စုလိုက်ခွဲခြားထားသိုခြင်း
ဖုန်းခေါ်ဆိုသော မိတ်ဆွေများ၏ နံပါတ်များအလိုက် အုပ်စုခွဲကာ သံစဉ်များအား တလှည့်စီ နားဆင်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းထံသို့ ခေါ်ဆိုသော ဖုန်းနံပါတ်များထဲမှ မိမိ၏ Tune အား မကြားစေချင်သော ဖုန်းနံပါတ်အား Blacklist ထဲတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
(Personal Setting) ကိုယ်ရေးဖိုင်
Ytune Service အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးဖိုင်ထဲတွင် မိမိနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များဖြစ်သည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အစရှိသည်တို့ကို ပြောင်းလဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိ လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သော ဖုန်းနံပါတ် (eg,9xxx xxx xxx) ကို ပယ်ဖျက်လိုပါက မိမိ ကိုယ်ရေးဖိုင်၏ Unsubscribe Menu Tab မှ တဆင့် ဝင်ရောက်ပယ်ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်လအတွင်း ရပ်ဆိုင်းလိုပါက လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လအတွက် လျှောက်ထားငွေ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသော လအတွက် အကောင့် လျှောက်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရန် လိုအပ်ပါမည်။ အကောင့်အား Suspend (ခေတ္တရပ်ဆိုင်း) လိုပါက ကိုယ်ရေးဖိုင်၏ Suspend Tab မှတဆင့် ဝင်ရောက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရပ်ဆိုင်းမှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက Ytune စာမျက်နှာအပေါ်ပိုင်း ၀ဲဘက်တွင်ရှိသော Log In Box အတွင်းရှိ Resume ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Suspend လုပ်ခြင်းအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
1876 (Yatanarpon Call Center) 24/7
02-51 78022 (Ytune Technical Help Desk) (Office Hour -:9AM to5PM )
သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုဖိုးကောင်း at 7:12 PM
Labels: အိုင်တီ ဗဟုသုတ
android app (46)
android game (5)
Basic Electronics (4)
computer repairing (9)
computer software (13)
custom recovery (7)
dead boot repair (2)
firmware flashing/upgrading (54)
JAVA app (1)
mobile hardware (21)
mobile news (41)
mobile software (4)
mobile tech android (13)
Myanmar Font (5)
Root Tools (15)
Samsung Galaxy (31)
secret code (12)
unlock tools (5)
Unlocking the BootLoader (2)
virus claning (1)
သိသင့် သော အခြားနည်းပညာများ (5)
အိုင်တီ ဗဟုသုတ (11)
ဲJTAG box (6)
အသဲလေး မောင် အိမ်ရောက်တော့မယ်
How to Make Windows XP Genuine
ကဲလက်တလောအဆင်ပြေနေပါတယ်တဲ့ G510 Root
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင် ဆက်စပ်သော စိတ်ရောဂါသစ် တွေ့ရှိ
Y210T and Y200T root
Small Games For Android....:)
huawei G510-0010 root နည်းလေးပါ။
APPLE ဧ။်ကမ္ဘာကျော် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု
ဇန်န၀ါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online Issue 26, V...
ယိုးဒယား တီဗီ လိုင်းလေးတွေပါ
KM mobile နှင့် ကျန်စစ်သား မိုဘိုင်း အတွက် လုပ်ထား...
Ice Age Village 1.0.5
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက် ချစားမှု နေပြည်တော်မှ...
android app များစုစည်းမှု
format factory is showing an error and not executi...
ကျပ် ၁ သိန်းထက်လျော့သည့် SIM ကတ်များရောင်းချရန် သမ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းက...
How to Set Up ADB and Fastboot with Android SDK
How to Enter Recovery Mode on Any Android Device
huawei ascend P 1 အတွက် official base jelly bean c...
Samsung Galaxy Official Firmwares
ပေါ.ပေါ. ပါးပါး apk ဖိုင်များ
Smart RAM Booster Pro v1.7
GSM Sim Card များ ကျပ်ငါးသောင်းဖြင့် ရောင်းချပေးရန...
မြန်မာစာစနစ် ပါဝင်သည့် HTC မိုဘိုင်းဖုန်းများအားြ...
Panasonic HD resolution ဖုန်းထုတ်မည်
ANDROID NOTE >MODILE A9550>ANDROID VERSION 4.0.6 က...
မြန်မာပြည်ဖွား HTC CEO, Mr. Peter Chou မြန်မာပြည်သ...
Myanmar Application Package ၃.The Voice News http...
Myanmar Application Package
Eleven,Hot News,သစ်ထူးလွင်တို့ကို Android ဖုန်းနဲ့...
အကောင့်များများဖွင့်ပြီး ပွားချင်သူတွေအတွက် IM+ Pr...
ငွေနှစ်ရာထဲအတွက် ငွေတစ်သောင်း မ ပလုံတဲ့နည်း
ငွေဖြည့်ကဒ် နှင့် လူလိမ်ပြသနာ ( ၂ )
ငွေဖြည့်ကဒ် နဲ့ လူလိမ် ပြသနာ
cwm အလွယ်သွင်းမယ် ....
Km mobile အင်းစိန်ကမ်းနား တွင် ငွေဖြည့်ကတ်အမျိုးမျ...
U8825D Root Without Waitng Unlock Code From Huawei...
မျှော်လင့်နေကြတဲ့ တန်ဖိုးနည်း တစ်သိန်းဖုန်း လာပြီ
Full Serial Keys Of Windows XP
နဂါးရန်က ကာကွယ်တဲ့ဂိမ်း For Android 20MB
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ ကို android ဖုန်းတွေ မှာ offli...
မြန်မာလို နည်းပညာ စာအုပ်များ (၁၀၃ အုပ်)
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ (103) အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ... Pyaybloger ကနေတဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ...။ About Deepfreeze ...
Huawei Phones Clockworkmod Recovery များနဲ့သွင်းနည်း
Huawei Phones Clockworkmod Recovery များနဲ့သွင်းနည်း By Htay Hlaing Oo and Bo Sunny Lwin in Myanmar Mobile Users Group ( File...
Huawei U8818 & C8812 ကို အလန်းဆုံးလုပ်မယ်
By Aung Hein Thant and Htay Hlaing Oo in Myanmar Mobile Users Group ( Files ) · အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Huawei U8818 & C8812...
Internet Settings for GSM/WCDMA in Myanmar
iOS အတွက် အင်တာနက်ဆက်တင်လေးပါ။ Settings-->General-->Network--> Cellular Data Network--->Cellular Data APN-->mptnet Intern...
Android Phone နှင့် Android Table Myanmar Font ထည့်နည်း
source http://mobilesoftwaredeveloper.blogspot.com/2013/02/android-phone-android-table-myanmar-font.html Android ဖုန်း နှင့် Tab...
Almost All Huawei Stock Roms (Firmware) - Updated 28/06/12
Please note: All links are to the relevant pages on my blogs. This is for two reasons: One - I didn't want to spam the forum with ...
SAMSUNG Flashing Programs
In this Section We try to give all our Friends and Visitors All we Can of Samsung Original Download Programs And Flashers To He...
[GUIDE] InstallingaRom/CWM recovery/Root or going back to Stock
Here isaguide I have put together for the Samsung SCH-I500 Fascinate. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1238070 Th...
[Stock][ROM][Odin] Galaxy Y S5360 flashable firmware packages
> [Stock][ROM][Odin] Galaxy Y S5360 flashable firmware packages RE...
Huawei C8813/C8813D,G520-0000,Y300-0000,Y300C,G510-0010 အကုန် ROOT လုပ်မယ်
စမ်းချင်ရင်လဲစမ်းကျပေါ့ဗျာ ကျနော့်မှာတော့စမ်းစရာကုန်ပီရှိသမျှ ပဲ….. အရင် ROOT အဆင်မပြေတဲ့ ဖုန်းတွေပါ..မလွယ်တဲ့ဖုန်းတွေပါ C8813 တို့ G510 ...
ကျွန်တော် သွားကူးလေ့ရှိသော နေရာများ
Han Nyi Nyi